မွနျမာဇာတျကား ၊ အလိုရှိသညျ(အကျရှငျ-စ/ဆုံး) နထေူးနိုငျ ကြျောဝငျးထှဋျ မသေကျခိုငျ ၊ Wanted ၊ Action
သရုပျဆောငျ- နထေူးနိုငျ ကြျောဝငျးထှဋျ မသေကျခိုငျ
Arr Man Film and Video Production & Distribution
This Video is broadcasting by Arr Mann Entertainment Channel.
The copyright is owned by Arr Mann.
Facebook Page - zappicture
THmy - #thmy.info/face/_IUdjPSWoo1jov91VEHa7A
မွနျမာ့ရုပျရှငျ နှငျ့ ဗီဒီယိုဇာတျလမျးမြားကို ရုပျသံကွညျလငျသော
HD Quality မြားဖွငျ့ Arr Mann Entertainment THmy Channel မှ
အခမဲ့ တရားဝငျ မူပိုငျဖနျတီးတငျဆကျပေးသှားမညျ ဖွဈပါသညျ။
Subscriptions မြားနဲ့ Like and Share မြားပွုလုပျပေးကွစလေိုပါတယျ။
Arr Mann Entertainment THmy Channel မှ တငျဆကျပွသသော
ရုပျရှငျ/ဗီဒီယိုမြားကို တစိတျတဒသေဖွဈစေ၊ တကားလုံးဖွဈစေ ကူးယူပွီး
Facebook, THmy, Social media ပျေါတှငျ အပြျောသဘောဖွဈစေ၊
ရညျရှယျခကျြရှိရှိဖွဈစေ၊ ပွသပါက ခိုးယူခွငျးမွောကျပါသဖွငျ့
#နထေူးနိုငျ #ကြျောဝငျးထှဋျ #မသေကျခိုငျ #myanmarmovie #Action
သရုပ်ဆောင်- နေထူးနိုင် ကျော်ဝင်းထွဋ် မေသက်ခိုင်
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် နှင့် ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းများကို ရုပ်သံကြည်လင်သော
HD Quality များဖြင့် Arr Mann Entertainment THmy Channel မှ
အခမဲ့ တရားဝင် မူပိုင်ဖန်တီးတင်ဆက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Subscriptions များနဲ့ Like and Share များပြုလုပ်ပေးကြစေလိုပါတယ်။
Arr Mann Entertainment THmy Channel မှ တင်ဆက်ပြသသော
ရုပ်ရှင်/ဗီဒီယိုများကို တစိတ်တဒေသဖြစ်စေ၊ တကားလုံးဖြစ်စေ ကူးယူပြီး
Facebook, THmy, Social media ပေါ်တွင် အပျော်သဘောဖြစ်စေ၊
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြစ်စေ၊ ပြသပါက ခိုးယူခြင်းမြောက်ပါသဖြင့်
#နေထူးနိုင် #ကျော်ဝင်းထွဋ် #မေသက်ခိုင် #myanmarmovie #Action
Ko Ko2 วันที่ผ่านมา
အားပေးကွညျ့ရူ့ခွငျးအတှကျ အားမာနျမှအထူးကြေးဇူးတငျပါတယျ ဇာတျကားကောငျးမြား တငျသောအခါ ခကျြခငျြးသိရအောငျလို့ Arr Mann Entertainment THmy Channel ကို Subscriptions, Like, Share and Get Notification လေးလုပျထားလို့ရပါတယျ။
Myat Thu18 วันที่ผ่านมา
Aung Ko24 วันที่ผ่านมา
အကွံပွူမှုအတှကျ ကြေူးဇူးတငျပါတယျ။ ယခုထကျပိုမိုကောငျးမှနျအောငျကွိုးစားသှားပါမယျ။ အားပေးကွညျ့ရူ့ခွငျးအတှကျ အားမာနျမှအထူးကြေးဇူးတငျပါတယျ
MLBB Mobile legeads Chouหลายเดือนก่อน
မလိုအပ်ပဲတီးလုံးထည့်တာက ဇာတ်ကားကြည့်ရတာ ကြည့်ခြင်စိတ်ပြောက်သွားတယ် အကြံပြုတာပါ
KoTHAN. WIN Koหลายเดือนก่อน
Hpakawn Zau shanหลายเดือนก่อน
ဟုတျတယျဂပြနျချေါလာပွီးတိုငျးရငျးသားတှကေိုတိုကျို့လုပျတာ တိုငျးရငျးသားတှကေ အဂျလိပျ တှနေဲ့ပေါငျးပွီးဂပြနျတှကေို တိုကျထုတျခဲ့တာ
Soe Soe Thanหลายเดือนก่อน
နေထူးနိုင်ဇာတ်ကား များများတင်ပေးပါဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙏😁
ဇာတျကားကောငျးမြားကို ကွိုးစားတငျပေးသှားပါ့မယျ။ ဇာတျကားကောငျးမြား တငျသောအခါ ခကျြခငျြးသိရအောငျလို့ Arr Mann Entertainment THmy Channel ကို Get notification လေးလုပျထားလို့ရပါတယျ။ အားပေးကွညျ့ရူ့ခွငျးအတှကျ အားမာနျမှအထူးကြေးဇူးတငျပါတယျ။
အခုချိန်မှာ အခုဇာတ်ကားထဲကပြောသလိုအရေးကြီးရင်သွေးစည်းပါတယ် တို့ ကိုယ့်အမျိုးကိုချစ်မှာတို့ မတရားရင်တော်လှန်ရမှာတို့ကို အခုချိန်မှာလုပ်ပြလိုက်စမ်းပါ..အမည်မဲ့ဓားသိုင်းတွေ မီးလက်ဝါး သိုင်း​တွေ မီးကျည်မင်းခေါင်အစွမ်းတွေအခုချိန်မှာ broရဲ့အကွက်တွေပြဖို့အချိန်တန်နေပြီလေ..broပါမှ နွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှာမို့ပါဝင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ပေးပါbroရာ.မီးလက်ဝါးကြီးကို အားကိုးပါရစေ...
မယုံလက်မလခံ တိုင်းရင်းတွေခံစားနေရတုန်းက မဟာဗမာတွေသူတို့တွေနှင့်မဆိုင်သလို ခါးထောက် ဟားတိုက်ရယ်နေကြတာ အခုထိမြင်ယောင်တုန်းဘဘဲ
အဲဒီကြောင့်ဘဲ အဲဒီလိုဘဲ ဒို့တိုင်းရင်းသား ညီကိုမောင်နှမတွေလဲ မဟာဗမာလူမျိုးကြီး လက်အောက်မှာခံစားနေရတာ အထူသဖြင့် သံရာဇာတွေထွက်တဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေက ပိုပြီးခံစားနေရတာ
မြန်မာဟေ့ မြန်မာ ဇာတ်ကားလေး တင်ပေးပါ
ရဲမင်းပိုင် သီဟတင်စိုး ရှိုင်းအောင် နေရဲလင်း နေသူရဦးကားဟောင်းတော်လှန်ရေးကားကြည့်ချင်တယ်
Nay myo Latt
good good good နေထူးနိုင်
Ni Ni Lwinหลายเดือนก่อน
ကြေးဇူးပါ အားမာနျ အရမျးကောငျး ဇာတျကားလေးက.
@Arr Mann Entertainment llhlllllhhlhl
နေထူးနိုင်က မိုးပြည့်နဲ့မှ ပိုလိုက်တယ်
လိလိုပဲ ဘယ်လိုတေလွှင့်နေတာလဲ အ့ကြောင့်မအောင်မြင်တာ Mahar လို
Myanmar Movies - တံခါး (ကြျောဟိနျး၊ရနျကြျော၊စိုးမွတျသူဇာ)
မွနျမာဇာတျကား - ဗိုလျတကာ့ဗိုလျ - နထေူးနိုငျ ၊ မှူးသခငျ - Myanmar Movies ၊ Action ၊ Drama ၊ Love
မွနှဈခဈြတဲ့ကိုဖိုးသဈ - မွနျမာဇာတျကား စ/ဆုံး - နထေူးနိုငျ - မွနျမာဇာတျကား
မွနျမာဇာတျကား၊ နှလုံးသား၏အမိနျ့တျော(စ/ဆုံး) ၊ Behest of Heart ၊ Myanmar Movie - နှလုံးသား၏အမိန့်တော်
မွနျမာဇာတျကား၊ ပနျးရိုငျးတျောဝငျ(စ/ဆုံး)နထေူးနိုငျ ၊ မငျးအုပျစိုး ၊ အောငျပိုငျ ၊ ခငျလေးနှယျ ၊ Action
ယုနဲ့ဘခကျ(စ/ဆုံး) ၊ နိုငျထကျဦး ၊ မိုးပွညျ့ပွညျ့မောငျ ၊ Myanmar Movies ၊ Drama ၊ မွနျမာဇာတျကား ၊
Shwe Sin Oo | Kyee Ma Noe Pwae | ကြီးမနိုးပှဲ | Myanmar Movie
Myanmar Movies-Mite Yal Yin Mite Khal Shi Tal-Nay Htoo Naing, May Htut
Myanmar Movies - နတျမိမယျမြား - The Angles - တငျ့တငျ့ထှနျး - မိုးဟကေို - သငျဇာဝငျ့ကြျော - Action
M35001 mpg eain daung yay website
မွနျမာဇာတျကား - ကြှနျတျောခဈြတဲ့မခငျနှငျးဆီ - နထေူးနိုငျ ၊ ပွညျ့ဝတီမောငျ - Myanmar Movies ၊ Action
မွနျမာဇာတျကား၊ မိုးကွိုးမုနျတိုငျးကြောကျဆောငျ(အကျရှငျ-စ/ဆုံး) ၊ Myanmar Movie၊ဒှေး သားညီ မငျးအုပျစို
4 ต่อ4CELEBRITY | 16 พ.ค. 64 | one31